Hevitra mandalo,Resaky ny mpitsompona akotry : Fandevenana ny tantara | NewsMada
Hevitra mandalo,Resaky ny mpitsompona akotry : Fandevenana ny tantara
Tsy ampy no sady mitory tsy fahamendrehana ny hetsika ho fahatsiarovana ny andro nahalavo an’Itompokolahy Richard Ratsimandrava izay nisy namono tao anatin’ny fotoana nanefany ny andraikitra maha Filoham-pirenena ny tenany. Antony roa no tokony anaovana hetsika ho fahatsiarovana izany tranga izany. Voalohany dia ho fanomezam-boninahitra an’iny olomanga namoy ny ainy noho ny fanatanterahana adidy araky ny heviny mikasika ny fanompoana ny fireneny. Faharoa dia ny tsy hiverenan’ny ratsy toy ny fifofoana ain’olombelona noho ny fankahalana azy na noho ny hevitra tsy mitovy.
Rehefa dinihina dia hany tavela tamin’iny tranga iny, dia ny fitandreman’ny manam-pahefana isan-karazany izay samy hodidinina mpiaro azy. Fahamalinana diso tafahoatra indraindray raha ampitahaina amin’ny loza mananontanona na tsy misy na tsy mendrika asiana sira toy ny firongoana fitaovam-piadiana izay diso arangaranga indraindray.
Marina fa efa mankaleo ity resaka vono olona ity. Na manara-baovao ao amin’ny haino aman-jery na mamadibadika gazety dia indraindray ihany no tsy sendra ny fitantarana asa ratsy feno habibiana nitarika famonoana olona. Tranga tany aloha indray ve no andeha hofohazina ?
Tsy ny aina sanatria no samy manana ny hasiny arakaraky ny maha olona ny tsirairay. Tsy manam-bidy ny aina noho izany mitovy lanja ary samy mendrika fitahiana daholo. Loza sahala ho an’izay mandatsa-drà. Na eo aza izany, mpitondra firenena Itompokaly Ratsimandrava ary ny fitsarana ny tompon’andraikitry ny famonona azy tsy nandresy lahatra mikasika ny tena marina eo amin’ny antony namonoana azy. Tsy eto akory ny sehatra ahafahana mamerina ny fiadiadiana izany. Ny hevitra entina ho fampiononana dia tsy ho very ny tadidy ary tsy havalona iny tranga teo amin’ny tantara iny raha tsy mbola milamina ny tànana izay anjakazakan’izao karazana tsy rariny rehetra izao, no sady tsy itoeran’ny fandriampahalemana.
Hitsidika ato ho ato ny fifidianana. Efa ela nizakana ny vokatry ny fahadisoana fitantanana ny vahoaka. Heverina fa samy hamadibadika ao an-tsainy ireo fomba tsy nety teo amin’ny fitondrana nifandimbidimby ny mpifidy tsirairay.